टेलिभिजन छाडेपछि रवि लामिछानेसँगको विशेष कुराकानी :- “अहिले सबै पार्टीले मलाई बोलाउँदै छन् ।” – Sadhaiko Khabar
टेलिभिजन छाडेपछि रवि लामिछानेसँगको विशेष कुराकानी :- “अहिले सबै पार्टीले मलाई बोलाउँदै छन् ।”
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ ०३, २०७९ समय: ५:४५:१८
काठमाडौं / सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने अन्ततः राजनीतिमा हो’मिएका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने योजनासहित उनले बिहीबार ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट बिदा लिए ।
परिस्थिति भन्नाले कुन कराले तपाईंलाई राजनीतिमा आउन बढी प्रेरित गर्यो ?
देशमा देखिएको जति पनि वि’तृ’ष्णा छ, मेरो जुन तहका नागरिकसँग दिनदिनै भेटघाट हुन्छ । त्यो तहका नागरिकको समस्या कहिले पनि एड्रेस भएको देखिनँ । ५–६ वर्ष मैले जनताको जुन समस्या देखेँ, त्यो समस्यासँग राजनीतिको मुल धारको कुनै कनेक्सन नै पाइनँ ।
जनताको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखेपछि कति समस्या मात्रै सुनाउने र मान्छेहरुको पी’डा मात्रै देखाएर बस्ने ? आफूले पनि नीतिगत तहमा योगदान दिन सकिन्छ कि ? भन्ने लागेको हो ।
देशैभरिबाट कुराहरु आइरहेको छ । मैले देशभरिका नागरिकको समस्यामा काम गरिरहेकाले यही क्षेत्र भन्ने छैन । ७ गतेसम्ममा टुंगो लाग्छ । म भोटर भएको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ ३ हो । काठमाडौंमै हुर्केको हुनाले अलिकति झुकाव त काठमाडौंमा हुने नै भयो । -नेपाल प्रेस